Iincwadi zikaFernando Aramburu: abantu, i-sordid kunye nezicwangciso ezivaliweyo | Uncwadi lwangoku
UFernando Aramburu: iincwadi
Ibinzana lasekhaya nguFernando Aramburu.
UFernando Aramburu ngomnye wababhali beencwadi ababalaseleyo kwindawo yoncwadi yanamhlanje yaseSpain. Nangona ebebhala ukusukela ngeminyaka yoo-90, kungonyaka ka-2016 apho wafumana udumo olukhulu ngomsebenzi wakhe. patria (2016). Libali elibonisa iminyaka engaphezu kwe-40 yoloyiko eyenziwa yi-ETA kwintsimi.
patria waphawula phambi nasemva kumsebenzi wakhe njengombhali. Ngale ncwadi uye wafumana amagqabaza abalaseleyo kubahlalutyi boncwadi, abayigqala njengenoveli engalibalekiyo. Ukususela ekupapashweni kwalo msebenzi, i-Aramburu iphumelele iimbasa ezibalaseleyo, phakathi kwabo: UFrancisco Umbral kwiNcwadi yoNyaka (2016), i-De la Critica (2017), i-Basque Literature ngesiSpanish (2017), i-Narrative yeSizwe (2017) kunye ne-International COVITE (2019).
1 Iincwadi nguFernando Aramburu
1.1 Amehlo angenanto: Antibula Trilogy 1 (2000)
1.2 Ixilongo laseUtopia (2003)
1.3 Ubomi bentwala egama linguMatías (2004)
1.4 Ilizwe lasekhaya (2016)
3 Iincwadi nguFernando Aramburu
Iincwadi nguFernando Aramburu
Amehlo angenanto: I-Antibula Trilogy 1 (2000)
Yincwadi yesibini yombhali, kwaye waqala ngayo I-Antibula Trilogy. Inoveli ibekwe kwilizwe eliyintsomi elinegama lesaga (Antíbula) kwaye lenzeka ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX.. Ibali linegazi kwaye lilusizi, kodwa linokukrola ithemba ngexesha elifanelekileyo; iinkcukacha zeli yelenqe zibaliswa ngumntwana—isiqhamo sothando olufihlakeleyo phakathi kwentombazana yasedolophini nomntu wasemzini—.
NgoAgasti 1916, eAntibula, yonke into iphezulu: ukumkani ubulewe kwaye ukumkanikazi wakhe uzama ukuphambuka. Ilizwe lijonge ukujongana nolawulo lobuzwilakhe, akukho nto iza kufana nangaphambili.
Njengoko esi siphithiphithi sityhutyha ummandla, umntu ongamaziyo ngasentla kwaye uhlala kwindawo yokuhlala. Imalunga nendoda entsonkothileyo efika kweli lizwe utsalwe yintombi yakudala Cuiña —umnini wehostele alungiselele ukuhlala kuyo—.
Ngokuchasene neminqweno yendoda endala, abantu abatsha baqala ubudlelwane, kwaye isiqhamo solu manyano sazalwa sisidalwa. Njengoko ixesha lihamba, inkwenkwana kufuneka ijongane nokugatywa kunye nenkohlakalo kayisemkhulu, ngenxa yezigqibo ezimbi zabazali bayo kunye neemeko ezimbi ezidla ilizwe.
kunjalo, ebulela uthando lukamama wakhe ukuzola okwaziyo ukukufumana Izicatshulwa zakhe zoncwadi azithandayo, umntwana ufumana amandla okuhamba emanzini kwaye unganikezeli, isimo sengqondo esinesigqibo embalini.
Ixilongo lase-Utopia (2003)
Yinoveli yesithathu yombhali. Yapapashwa eBarcelona ngoFebruwari 2003. Le ncwadi yenzeka phakathi kweMadrid ne-Estella, inezahluko ezingama-32 ezahlulwe ngokutyebileyo kokusetyenziswa kolwimi. Ibali linochuku oluchanekileyo loburharha abamnyama-umzekelo wombhali-kwaye libonisa abalinganiswa abakhohlakeleyo, abasondeleyo, abangabantu, benziwe kakuhle kakhulu.
UBenito yindoda engamashumi amathathu ephumileyo eyunivesithi kwaye isebenza kwibha yaseMadrid ebizwa ngokuba yi-Utopía.. Ukongeza kumsebenzi wakhe kwi-bar, ngamanye amaxesha udlala ixilongo ngethemba lokuba umntu uya kuyixabisa italente yakhe. unobomi benkululeko kwaye umzimba wakhe uyakhwaza ubungqina baloo nto: ubhityile, umbatshile kwaye uhaggar.
Ngenxa yelishwa losapho, lo mfana umele afudukele kwidolophu yakowabo, e-Estella —kumantla eSpeyin—: uyise uyafa. Nangona engazange abe nobudlelwane obuhle kunye naye, uthatha isigqibo sokuhamba ngokunyanzeliswa kweqabane lakhe, uPauli, nangenxa yelifa elinokubakho. Nangona uBenito wayecinga ukuba uhambo lwakhe luya kuba lula "yiza kwaye uhambe", iziganeko ezininzi zatshintsha zonke izicwangciso zakhe, kunye nobomi bakhe.
Ubomi bentwala egama linguMatías (2004)
Yinoveli yabantwana nolutsha athe umbhali wayibhala ngolu hlobo: "Ibali labantu abatsha ukusuka kwiminyaka esibhozo ukuya kumashumi asibhozo anesibhozo ubudala". Incwadi sisikweko esinomdlali oyintloko yintwala egama linguMatías, obalisa kumntu wokuqala ngeziganeko zakhe phakathi kwehlabathi lakhe elincinci neliyingozi.
UMatías yintwala esele ebudaleni bakhe ithatha isigqibo sokubalisa ngobomi bakhe kunye nendlela awakwazi ngayo ukusinda kwindalo yakhe encinci.. Wazalelwa entanyeni yomqhubi kaloliwe, indawo enkulu eneenwele eziluhlaza kunye nekepusi yecorduroy eqhelekileyo. Ubukho bayo kwakufuneka buxhathise: izaqhwithi ezinogwebu, umoya oshushu ovela kwisomisi kunye neminwe eyoyikekayo ekrwelayo.
Ngenye imini uthatha isigqibo sokuthatha umngcipheko kunye nodade wabo iqala ukuhamba iindlela ezintsha ikhangela umthombo kufuphi nendlebe. Kodwa iintwala ezimsulwa ziwela ezandleni zikaKumkani uCaspa, obanyanzela ukuba basebenze ekwakhiweni kwebhotwe lakhe. Le mpazamo iba yinxalenye enzima kakhulu yobomi bakhe: Walamba wanxanwa, wathandana, wazala abantwana waza wafumana iingcebiso kwezinye iintwala ezindala.
Ubomi bentwala ebizwa ngokuba...
Idweliswe ngabagxeki boncwadi njengenye yeenoveli ezibalulekileyo ze-Aramburu. Iqhinga lenzeka kwidolophu eqingqiweyo eGuipúzcoa, apho iqela lamaphekula i-ETA lasebenzisa ingcinezelo yezopolitiko. Ibali lichaza ixesha elide lengxabano yaseBasque, ukususela ekuhlaselweni kokuqala kwi-1968 Kwiminyaka emva kwe-Francoism- kude kube ngo-2011xa kubhengezwa ukupheliswa kokudubula.
iBasque Country Landscape
Kwi 2011, ixesha emva kokuba i-ETA ibulele uTxato Lertxundi, iqela labavukeli lagqiba ekubeni linikele kuphele ungquzulwano ngezigalo. Emva kwezi ndaba, umhlolokazi walo somashishini wagqiba kwelokuba abuyele elalini apho wayekhe abaleke kunye nosapho lwakhe ngenxa yengcinezelo ka-abertzale.
Ngaphandle kokupheliswa kokudubula, UBittori kwafuneka abuyele ngokuqaphela kakhulu, kwaye kungenxa yoko wafika ngokufihlakeleyo kuloo ndawo. Nangona kunjalo, ubukho bakhe baphawulwa: uxinzelelo lwakhula kwaye ukuzingela kwaveliswa kuye nakubantu bakhe.
Ilizwe lasekhaya (i-Adventures)
UFernando Aramburu U-Irigoyen wazalwa ngoJanuwari 4, 1959 eSan Sebastian, kwiLizwe laseBasque (eSpain). Wakhulela kwintsapho ethobekileyo nesebenza nzima. Uyise wayengumsebenzi kwaye umama wakhe engumfazi wekhaya. Wafunda kwisikolo sika-Augustinian kwaye ukususela emncinci wayengumfundi okhutheleyo, umlandeli wemibongo kunye nethiyetha..
Wangena kwiYunivesithi yaseZaragoza kwaye wafunda iHispanic Philology, kwaye wafumana isidanga sakhe ngo-1983. Kwangelo xesha, wayengoweGrupo CLOC de Arte y Desarte, apho wayesenza imisebenzi eyahlukahlukeneyo edibanisa imibongo kunye noburharha. Ngowe-1985 wafudukela eJamani —emva kokuthandana nomfundi ongumJamani—, apho waba ngumfundisi-ntsapho waseSpeyin.
Ngo-1996 wapapasha inoveli yakhe yokuqala: Imililo yelamuni, ingxabano yakhe yayisekelwe kumava akhe kwiQela le-CLOC. Kamva wapapasha amanye amabali, phakathi kwawo oku kulandelayo: Amehlo angenanto (2000) Bami akukho sithunzi (2005) kunye Iminyaka ecothayo (2012). Nangona kunjalo, umsebenzi oye wavelisa umsebenzi wakhe patria (2016), apho wakwazi ukuthengisa iikopi ezingaphezu kwesigidi esi-1 kwaye yaguqulelwa kwiilwimi ezininzi.
Ukongeza kwiinoveli zakhe, IsiSpanish sipapashe imibongo, amabali amafutshane, ii-aphorisms, izincoko kunye neenguqulelo. Kwakhona, eminye yemisebenzi yakhe iguqulelwe kwifilimu, imiboniso bhanyabhanya kunye nomabonwakude, injalo imeko:
Ngaphantsi kweenkwenkwezi (2007, ifilimu), ukulungiswa kwe Ixilongo laseUtopia, ophumelele iimbasa ezimbini zeGoya.
ubomi a intwala kubizwa Matías (2009). Yatshintshwa ukuba ibe ngunopopi wethiyetha yinkampani i-El Espejo Negro. Iphumelele iwonga leMax yoMboniso waBantwana oBalaseleyo.
Uthotho lweTV Ilizwe lasekhaya, iveliswe yi-HBO kwaye yakhululwa ngo-2020.
Imililo yelamuni (1996)
Amehlo angenanto (2000)
Bami akukho sithunzi (2005)
UMarivian omkhulu (2013)
Hamba noClara udlula eJamani (2010)
Iminyaka ecothayo (2012)
ukuzenza okubawayo (2014)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UFernando Aramburu: iincwadi
UGeronimo Stilton: Iincwadi
UDavid Sanudo. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi ethi The Lost Lost